Realme dia nandefa smartphone 10 tapitrisa manerantany tao anatin'ny 14 volana | Androidsis
Realme dia nandefa smartphone 10 tapitrisa manerantany tao anatin'ny 14 volana monja
Aaron Rivas | | Finday, About us
Realme dia iray amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta izay nitombo indrindra tato ho ato. Tsy isalasalana fa fanapahan-kevitra oppo, izay natao hampandehanana tena mahaleo tena, dia tena nanintona ny isan'ny varotra an'ny orinasa, ary koa ny fanitarana azy ho any amin'ny faritany hafa - tafiditra ao Shina y Eoropa-.
Ny marika dia nanapotika ny drafitra rehetra any India, ny tsenany lehibe. Any dia eken'ny olona sy eken'ny mpanjifa izy io, ka izany no antony isian'ny laharana voalohany amin'ireo orinasa finday ambony eto amin'ny firenena. Misaotra noho ny nanaparitahany ny paikadiny, tsy ny fanolorany ny tenany any ihany, fa ny firenena hafa koa tsy ela akory izay, ny fitaterana azy dia nitombo be dia be, hatramin'izao, ao anatin'ny firaketana 14 volana dia nahavita nandefa fitaovana 10 tapitrisa izy. Azo antoka fa tamin'ny fotoana namoahana an'ity lahatsoratra ity dia efa nihoatra ny isa io.
Weibo no tambajotra sosialy bilaogy bitika malaza indrindra amin'ny alàlan'ny fampandrenesana sy fanararaotana ataon'ny orinasa. Tamin'ny alàlan'ity dia namoaka ny vaovao tsara i Realme.
Ny zava-bita dia vita teo anelanelan'ny 16 Mey 2019, rehefa natomboka ny Realme 1, ary anio. Amin'ny ankapobeny, ny orinasa dia nivarotra smartphone 22,000 teo ho eo isan'andro, saingy mazava fa tsy mandeha toy izany izy, satria ny tena tarehimarika dia misy fiantraikany amin'ny andro sy ny fotoana isan-taona.
Tena te hitombo hatrany izy, manao izany ary hanohy izany. Tanteraka ny fikasan'izy ireo hivarotra any Shina, ho fitsapana, ary koa ny fanitarana azy manerana an'i Eropa. Ny toerana mbola tsy dia anisany dia any Amerika atsimo sy Amerika avaratra, fa afaka mahazo vaovao momba ny fanaparitahana manerana an'io kontinanta voazarazara io isika tsy ho ela. Angamba afaka volana na taona vitsivitsy dia hahita Realme manao fanatontoloana erak'izao tontolo izao isika, toy ny Huawei, Xiaomi na Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Realme dia nandefa smartphone 10 tapitrisa manerantany tao anatin'ny 14 volana monja
Fossil Gen 5: Ireo fiambenana vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Misambotra an'i Apple ny abidia ary lasa orinasa manana vola be indrindra eran'izao tontolo izao